Superiordị akwa anya kachasị elu na-adabere na ngwakọta anya anya, nke nwere ọrụ nke mgbochi na mgbochi ọkụ.
Bohua eyewash nzukọ bụ otu oge ebu nkedo ịkpụzi, ezigbo elu, ike mkpakọ iguzogide, ogologo ọrụ ndụ. Enweghị nsogbu ọ bụla n'oge oyi ma ọ bụ nrụgide mmiri dị elu. Ọdịdị na-adịghị mma na-aghọ akụkụ ịgbado ọkụ mgbe niile, ọrụ ahụ siri ike, nke ka ukwuu maka ịgbado ọkụ, nke na-emetụtaghị ọdịdị ahụ kamakwa ọ na-ebelata ọrụ ndụ, ọ dịkwa mfe ime ka ọkpọkọ mmeba ahụ gbawaa na mpaghara oyi ma ọ bụ mgbe nsogbu mmiri buru ibu.
Myọ ihuenyo:akpa oyi akwa nke eyi elu njupụta nyo ihuenyo, iyo nke ibu ahụ na mmiri adịghị. Nke abụọ oyi akwa adopts anọ n'ígwé nke elu njupụta 304 igwe anaghị agba nchara ntupu staggered Ọdịdị, n'ihu nyo ezi adịghị, n'otu oge na-achụsakwa mmiri, nke mere na mmiri n'ime a afụ, nwayọọ itucha anya, zere adịghị na mmiri siri ike kpatara nke abụọ mmebi anya
Wersa onu ọkara onu imewe, radian karị R250 na R39 abụọ ezigbo akụkụ ahụ tangent, nke mere na mmiri ịsa ahụ na ịsa ahụ efere ahụ mgbidi, tinyere radian na-agbasa, dị nnọọ elu nke 1524mm, iru dayameta nke 508mm mkpuchi, n'ụzọ zuru ezu izute ihe ndị achọrọ maka ọkọlọtọ ndị America na igwe anya anya
Ogwe bọl elu dị elu na-anabata valvụ mpempe mpempe abụọ, nke dị elu karịa valvụ bọọlụ otu, nwere oghere buru ibu ma nwee ike izute ọkọlọtọ ọkọlọtọ America nke na-ekpuchi ngwa anya. (itucha eruba ≥ 75.7L / min, anya asa eruba ≥ 11.4L / min, irè na ngwangwa itucha).
Modelkpụrụ isi: BH30-1008
BH32-1008: Dabere na isi ihe nlereanya, a gbanwere ya ka ọ bụrụ ihe nhicha anya, ma kagbuo akụkụ mmiri ozuzo ahụ
Nke gara aga: Mobile obere anya washer
Osote: Comprehensive anya na-asa ọdụ
Liri abụọ mkpanaka anya washer